गायक महिमा को जीवनी - सबैभन्दा होनहार रूसी पप गायक को एक
अपमानजनक demeanor, उज्ज्वल उपस्थिति र निस्सन्देह गायन प्रतिभा गायक Slava, आज हामीलाई छलफल गरिने जीवनी, सार्वजनिक ध्यान केन्द्र भए भन्ने तथ्यलाई गर्न योगदान। यो चरण मा शो अघि, त्यो मनोविज्ञान र भाषा बिज्ञान र पर्यटन मा dabbled, र एक क्यासिनो प्रबन्धक मा काम गर्ने रोचक छ। गायक महिमा को जीवनी प्रसिद्धि उनको नेतृत्व भन्ने रोचक संयोग भरिएको छ। का बाहिर के पाउन गरौं!
गायक Famer को जीवनी: बाल्यकाल र युवा अभिनेत्री
1980 मास्को मा मा, Slanevskaya परिवार मा जन्मेका एक केटी, नाम Anastasia थियो। यसलाई मई 15 मा भयो। त्यो हृदय धेरै विदेशी र रूसी गीतहरू द्वारा थाह भलिबल संलग्न र कराओके गाउन गर्न प्रेम, - बाल्यकाल देखि Nastya खेल को रुचाउनु थियो। त्यो बल्लतल्ल दुई वर्षको हुँदा केटी आमाबाबुले छोडपत्र, त्यसैले यसलाई सधैं बाबुको प्रेम अभाव छ। गायक अनुसार, त्यो एउटा कुरूप duckling, अक्सर केटाहरूसँग लडे जस्तै सधैं महसुस र म यो संसारमा कुनै एक प्रेम छ कि लाग्यो। त्यतिबेला यसलाई चाँडै त्यो प्रशंसक र उनको प्रतिभा को admirers धेरै हुनेछ भन्ने कुनै विचार पनि थियो।
गायक महिमा को जीवनी: कठिन समयमा
कलाकार यो छ रूपमा, बाल्यकाल देखि ज्ञात थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद - एक बस्न एक्लो आमा वा बुबा परिवार, त्यो आफ्नो आमा को भाग्य बारम्बार। उनको पहिलो पति संग उनको छोडपत्र र Anastasia एक बच्चा संग एक्लै बाँकी थियो। गायक यो उनको क्यासिनो व्यवस्थापकले तलब बस्न धेरै गाह्रो थियो भन्छन्। त्यतिबेला त्यो साँच्चै जीवनमा के गर्न आवश्यक छ के को बोध आए। त्यो गाउन गर्न चाहन्थे, र एक कराओके छैन, र ठूलो मञ्चमा।
गायक Slava: जीवनी - परिवार
को सांगीतिक Olympus केटीले त्यो रेस्टुरेन्ट मा एक पटक भेट जसलाई एक प्रेमी, सुरक्षित मदत ओर्लन्छन्। त्यो सम्झना रूपमा, तिनीहरूले महंगा रेस्टुरेन्ट मा bridesmaids आउँदा बस आराम। Danilitsky अनातोली, कम्पनी "Aeroflot" को सह-मालिक, संग Familiarity पूर्ण उनको जीवन परिवर्तन भयो। यो मात्र होइन अचल सम्पत्ति गर्न हीरे देखि, उनको बहुमूल्य कुराहरू दिन्छ, तर पनि उनको सपना लागू गर्न मदत। अनातोली Antonovich Anastasia को वित्तीय समर्थन धन्यवाद चरण एक गायक भए महिमा को नाम। प्रेमीहरूको हालै पति र पत्नी भएका छन्, र यो एउटा ठूलो रोक्दैन उमेर फरक: 28 वर्ष को लागि अनातोली पुरानो महिमा। - Antonin आफ्नो पहिलो विवाह, अलेक्जेन्डर र साना, सामान्य देखि Famer को जेठो छोरी: सँगै तिनीहरूले दुई छोरी हुर्काउन छन्।
गायक महिमा को जीवनी: क्यारियर उपलब्धि
पहिलो हिट फेम "प्रेम र घृणा" सबै चार्ट उडायो द्वारा प्रदर्शन गीत थियो। आफ्नो रचनात्मक गतिविधि को पहिलो दुई वर्ष महिमा संगीत सयौं दिए र आफ्नो पहिलो एल्बम भनिन्छ जारी "सँगी यात्री।" यसको आर्सनलमा कुल पहिले नै तीन एल्बम, नौ भिडियो, फिलिम "अनुच्छेद 78" मा भूमिका। गायक बारम्बार हकदार वार्षिक कन्सर्ट भाग लिए "मुख्य कुरा बारे नयाँ गीतहरू।" पुरस्कार "यस वर्षको गीत।" - यस गीत को लागि "चिसो" महिमा को "स्वर्ण Gramophone" र "एकाकीपनसित सङ्घर्ष" प्राप्त
दान महिमा संलग्न काम संग समानान्तर मा: त्यो नियमित गतिविधिहरु र घटनाहरू एचआईभी-संक्रमित मानिसहरूलाई समर्पित भाग लिन्छ।
अन्ना Semenovich को जीवनी - समूह को soloist "चम्काउने"
Rapper Tbili वार्म: जीवनी र काम
Irina Maslennikova - ठूलो ओपेरा DIVA
अन्ना Semenovich - उचाइ, तौल र अन्य डाटा
"काला Obelisk" - घरेलू भूमिगत को पौराणिक कथा
सबैभन्दा रोचक सदस्य हुनुहुन्छ? "मेक्सिकोमा छुट्टी" - शो श्रोता पुरस्कार
सिंगापुर होटल मेरिना खाडी बालुवा
एलर्जी लक्षण, वा कसरी रोग पहिचान गर्न
चिनियाँ चिकित्सा केन्द्र
के परिवर्तन "Priora" अद्यावधिक मोटर चालकहरुलाई चकित हुनेछ?
बिजुली वर्तमान के हो: दिशात्मक गति
रचनात्मकता र रे चार्ल्स को जीवनी
हामी एक कम्प्युटर स्वतः बन्द-बन्द गर्नुपर्छ?
नुनीन बनान लागि खीरे को सर्वश्रेष्ठ प्रजातिहरू
नोटबुक को पहुँच बिन्दु
1812 मा स्मोलेन्स्क को लडाई - नेपोलियन विरुद्ध रूसी सेना को पहिलो गम्भीर मतभेद